Walaac laga muujiyay nidaamka doorasho ee Puntland (dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 4, 2018 9:07 b 0
Shalay guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa shahaado guddoonsiiyay shan urur siyaasadeed oo horay looga dhawaaqay Puntland, qaybna ka noqon doona qorshaha hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee Puntland oo ka mid ahaa balanqaadyada madaxwaynaha Puntland ee mudo xileedkiisu gabagabada yahay.
Nidaamka xisbiyada badan ee Puntland oo xukuumadihii hore Puntland usoo maray ay kusoo fashilmeen inay hirgaliyaan ayaa hadana waxaa soo baxaya dhaliilo loo jeedinayo maamulka hadda jira ee Puntland oo kusaabsan inuu diyaarin qorshihii doorasho loogu diyaar garoobi lahaa kahor sanadkan inta uu dhamaan ee wax ku qaybsiga beelaha ee kuraasta baarlamaanka ee 66da xubnood iyo in nidaamkaasi mid ka duwan doorashada lagu gelayo.
Urur wax ka qora arimaha Geeska Afrika oo fadhigoodu yahay wadanka Ingiriiska ayaa sheegay inay suurta gal noqon karin in waqtiga u haray xukuumadda hadda jirta lagu qabto doorasho ku dhisan habka xisbiyada furfuran loogana gudbo nidaamka qabiilka ee xildhibaanada ay dooranayaan hogaanka Puntland.
Maxamuud Cabdi Ibraahim ayaa walaaca arrintan kusaabsan wax ka waydiiyay Axmed Yuusuf Madoobe oo katirsan ururka cilmi baarista iyo xog uruurinta dalalka Bariga Afrika ee fadhigiisu yahay London.
Ruushka oo ku baaqay in la taageero ciidamada Soomaaliya